အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Alfred Abate ။ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ်ပာယျ, ဇာစ်မြစ်, ထိုအမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Alfred Abate ၏လိုက်ဖက်တဲ့။ အားလုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
Alfred Abate အဓိပ္ပာယ်ကို
နာမကိုအမှီ Alfred Abate နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Abate ၏အဓိပ္ပာယ်ကို၏အကျဉ်းချုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အဓိပ္ပာယ် Alfred ။
Abate ၏သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်ကို။ အဆိုပါအမညျ Abate ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
Alfred ၏ compatibility နဲ့ Abate
အမညျ၏ compatibility Abate နာမည် Alfred ။
အဆိုပါအမညျ Abate ၏မူလအစ။
နောက်ဆုံးအမည်၏အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ Abate ၌ဤအမည်သစ်ကိုရသော။
နောက်ဆုံးအမည် Abate မြေပုံပြန့်ပွား။
Learn ဘယ်လိုအမည်သစ်ကိုရသော Abate အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်မျိုးရိုးအမည်ကိုက်ညီ။
Abate အခြားအမျိုးရိုးအမည်နှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်။
အမညျနှင့်အတူအသုံးအများဆုံးနှင့်ဆန်းအမည်များ Abate ။
Abate အကောင်းဆုံးအမည်သစ်ကိုရသောအဓိပ္ပါယ်များ: ဖော်ရွေ, အရည်အချင်း, စေတနာစိတ်နှင့်, စေ့စေ့နားထောင်, ခေတ်သစ်. ရယူ Abate အမညျ၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
Abate ဇာစ်မြစ်. From Italian abate meaning "abbot, priest", derived via Latin and Greek from an Aramaic word meaning "father". This was used either asanickname or an occupational name foraworker inapriest's house. ရယူ Abate ဇာစ်မြစ်.
နောက်ဆုံးအမည် Abate အတွက်အသုံးအများဆုံး အီသီယိုးပီး. ရယူ Abate အမည်သစ်ကိုရသောပျံ့နှံ့.
ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ Abate ဘို့ပြောရလျှင်မျိုးရိုးအမည်: Abbott, Abt. ရယူ Abate အခြားဘာသာစကားများ.
နာမည်အသုံးအများဆုံးမျိုးရိုးအမည် Alfred: Yew, Bonillo, Meabon, Thaniel, Cartrette. ရယူ နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း Alfred.
နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးအမည်များ Abate: Orval, Alfred, Alphonso, Melynda, Chadwick, Alfréd. ရယူ Abate နှင့်အတူသွားသောအမည်များ.
Alfred ၏ compatibility နဲ့ Abate 84 ဖြစ်ပါသည်. ရယူ Alfred ၏ compatibility နဲ့ Abate.
Alfred Abate အလားတူအမည်များနှင့်မျိုးရိုးအမည်
Alfred Abate Alf Abate Alfie Abate Fred သည် Abate Ælfræd Abate Alfredas Abate Alfredo Abate Alfréd Abate Fredo Abate Alfred Abbott Alf Abbott Alfie Abbott Fred သည် Abbott Ælfræd Abbott Alfredas Abbott Alfredo Abbott Alfréd Abbott Fredo Abbott Alfred Abt Alf Abt Alfie Abt Fred သည် Abt Ælfræd Abt Alfredas Abt Alfredo Abt Alfréd Abt Fredo Abt